ABSDF က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် အကြောင်းပြန်။ ~ Htet Aung Kyaw
ABSDFကျောင်းသားတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တချို့ မြန်မာပြည်ပြန်မည်
ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော် အတွင်းရေးမှူးဟောင်းကိုအောင်သူငြိမ်း နှင့် အဖွဲ့ ဝင်ဟောင်းများဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်နိုင်ဦး၊ ကိုမင်းဇော်ဦးတို့ ဖေ ဖော်ဝါရီလဆန်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
" အလည်အပတ်အနေနဲ့ လာမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲလာလို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အပြီးပြန်လာချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကူးအပြောင်းမှာ မှတ်ပုံတင်ကိစ္စတရားဝင် ပြန်နေထိုင်ဖို့၊ ပတ်စပို့ပြန်လျှောက်ထားဖို့ စသည်ဖြင့် အချိန်ယူရပါဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာ နေထိုင်လာတာ ၂၄ နှစ်နီး ပါးရှိပြီဆိုတော့ ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများက ပြည်ပမှာ ချိတ်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဥပမာ-ဘဏ် အကောင့်၊ ခရစ်ဒစ်ကတ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ" ဟု ဗဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ ကိုအောင်သူငြိမ်းက ပန်းသတင်းဂျာနယ်ကို ပြောသည်။
ယခုပြန်လာမည့် သုံးဦးအနက်မှ ကိုအောင်သူငြိမ်းနှင့် ကိုအောင်နိုင်ဦးတို့သည် ဗဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းထုတ် ပန်းသတင်းဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိမ်က ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကို တိုင်းပြည်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ပြန်လာရန်ဖိတ်ခေါ်မှုများ ပြုလုပ်သဖြင့် ပြည်ပသို့အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။
ကျောင်း​သား​တပ်မ​တော်ရဲ​ဘော် ၃၀ ​ကျော် အဖမ်း​ခံထား​ရဆဲ
Published on January 17, 2012 by webteam . DVB
ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်​နေ့​ လွတ်ငြိမ်း​ချမ်း​သာခွင့်​မှာ ​ကျောင်း​သား​တပ်မ​တော်က ရဲ​ဘော် ၁၃ ဦး​ ပြန်လည်လွတ်​မြောက်လာခဲ့​ပြီး​ အကျဉ်း​ထောင်အသီး​သီး​မှာ အနည်း​ဆုံး​ ၃၀ ​ကျော် ကျန်​နေ​သေး​တယ်လို့​ ​အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ဒုဥက0x081ကဋ0x081ဌ ကိုမျိုး​ဝင်း​က ​ပြောပါတယ်
ရဲဘော်မျိုးဝင်း။ ABSDF ဒု ဥက္ကဌ
ကျောင်း​သား​တပ်မ​တော်ရဲ့​ လက်ရှိ နိုင်ငံ​ရေး​ဗျူဟာက လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့​ လူထုတိုက်ပွဲ ​ပေါင်း​စပ်​ရေး​ဖြစ်ပြီး​ ​ကျောင်း​သား​တပ်မ​တော်က ရဲ​ဘော် ​တော်​တော်များ​များ​ အဖမ်း​ခံထား​ရပါတယ်။ဒီမိုက​ရေစီအသွင်ကူး​ပြောင်း​ရေး​ လုပ်ငန်း​စဉ်မှာ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​တွေကို အကုန်လွှတ်​ပေး​ပြီး​ တြပည်လုံး​ အပစ်ရပ်ဖို့​ဟာ အရင်ဆုံး​လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့​ ကိုမျိုး​ဝင်း​က ​ပြောပါတယ်။
“အခု ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်​နေ့​မှာ လွှတ်​ပေး​တဲ့​ အသုတ်မှာ​တော့​ ၁၃ ​ယောက်ပါလာတယ်။ ကျန်တာ​တော့​ လက်လှမ်း​မီသ​လောက် ပြုစုထား​တဲ့​ အ​ခြေအ​နေရဆိုရင်​တော့​ ၃၀ ​လောက် အကျဉ်း​ထောင်အသီး​သီး​မှာ ကျန်ပါ​သေး​တယ်။ အဓိက အ​ခြေခံအား​ဖြင့်​တော့​ နိုင်ငံ​ရေး​ နည်း​လမ်း​အရ ​ပြေလည်​အောင် ကြိုး​ပမ်း​တဲ့​နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊​ ဒီမိုက​ရေစီ အသွင်ကူး​ပြောင်း​ရေး​အတွက် ကြိုး​ပမ်း​တဲ့​နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျ​နော်တို့​ ယုံကြည်ချက်​ကြောင့်​ အကျဉ်း​ကျခံ​နေရသူ အား​လုံး​ကို လွှတ်​ပေး​ဖို့​လိုတယ်။
ဒီမိုက​ရေစီ ကူး​ပြောင်း​ဖို့​ အစီအစဉ် ​ဖော်​ဆောင်မယ်ဆိုရင် အား​လုံး​ပါဝင်နိုင်တဲ့​ နိုင်ငံ​ရေး​ အခင်း​အကျင်း​၊​ တိုင်း​ပြည်ပြန်လည်ထူ​ထောင်​ရေး​မှာ အား​လုံး​ပါဝင်နိုင်တဲ့​ အ​ခြေအ​နြေဖစ်လို့​ ဖန်တီး​ပေး​ဖို့​လိုတယ်။ ကျ​နော်တို့​ ​အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်က ရဲ​ဘော်​တွေအပါအဝင် ယုံကြည်ချက်​ကြောင့်​ အကျဉ်း​ကျ​နေတဲ့​ နိုင်ငံ​ရေး​ အကျဉ်း​သား​အား​လုံး​ကို ခြွင်း​ချက်မရှိ အြမန်ဆုံး​ လွှတ်​ပေး​ဖို့​ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ​တော့​ ကျ​နော်တို့​ အဖွဲ့​အစည်း​အ​နေနဲ့​တော့​ သ​ဘောထား​ရှိပါတယ်။”
အခုအချိန်ထိ မလွတ်​မြောက်​သေး​တဲ့​ ​ကျောင်း​သား​တပ်မ​တော် ရဲ​ဘော်​တွေထဲမှာ ​ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်း​၊​ အနှစ် ၆၀ ​ကျော်အထိ ချမှတ်ခံထား​ရသူ​တွေ ပါဝင်ပြီး​ သူတို့​ကို ၁၉၉၀ အလွန် နှစ်​တွေက​နေ မြကာခင်နှစ်​တွေအတွင်း​ အစိုး​ရက ဖမ်း​ဆီး​ထောင်ချခဲ့​တာလို့​ သိရပါတယ်။
ဒါ့​အြပင် အခုလ ၁၀ ရက်​နေ့​က အစိုး​ရဘက်က​နေ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အတွက် ​တွေ့​ဆုံ ​ဆွေး​နွေး​ဖို့​ ကမ်း​လှမ်း​ထား​တာကို အြပုသ​ဘော တုံ့​ပြန်သွား​ဖို့​ သ​ဘောထား​ ရှိတယ်လို့​ ကိုမျိုး​ဝင်း​က ​ပြောပါတယ်။
“သူတို့​ကမ်း​လှမ်း​လာတဲ့​ အ​ပေါ်မှာ​တော့​ အပြုသ​ဘော​ဆောင်တဲ့​ ကမ်း​လှမ်း​မှုလို့​ ကျ​နော်တို့​ သုံး​သပ်တယ်​လေ။ ဒီအ​ပေါ်မှာ ကျ​နော်တို့​အဖွဲ့​အစည်း​အ​နေနဲ့​တော့​ အြပုသ​ဘောတုံ့​ပြန်ဖို့​အတွက်​တော့​ သ​ဘောထား​ရှိတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ အ​သေး​စိတ်​တော့​ ဒီအချိန်မှာ ​ပြောဖို့​က​တော့​ ​စော​သေး​တယ်။ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​လွတ်​မြောက်​ရေး​ အပါအဝင် တြပည်လုံး​အတိုင်း​အတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​ရေး​။ ဒါ​တွေဟာ ကျ​နော်တို့​ ကနဦး​အဆင့်​မှာ အြပုသ​ဘော​ဆောင်တဲ့​ ​ဆောင်ရွက်မှု​တွေကို ​ဆောင်ရွက်ဖို့​လိုတယ်လို့​ မြင်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံလုံး​ဆိုင်ရာ ​ကျောင်း​သား​များ​ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး​ (​အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်) ဟာ ၁၉၈၈ လူထုအ​ရေး​တော်ပုံကို စစ်တပ်က နှိမ်နင်း​တဲ့​ ​နောက်မှာ လက်နက်ကိုင် ​တော်လှန်​ရေး​လုပ်ဖို့​ နယ်စပ်ကို ထွက်လာတဲ့​ ​ကျောင်း​သား​တွေနဲ့​ စတင် ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​တာဖြစ်ပါတယ်၊လွန်ခဲ့​တဲ့​ နှစ်​တွေက အစိုး​ရက တိုင်း​ရင်း​သား​အဖွဲ့​တချို့​နဲ့​ အပစ်ရပ်​ရေး​၊​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ကိစ0x081စ​တွေ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ပေမယ့်​ ​ကျောင်း​သား​တပ်မ​တော်ကို တိုက်ရိုက် ကမ်း​လှမ်း​တာမျိုး​ မရှိခဲ့​ပါဘူး​။
တတိယ နိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယ ဝေဒနာ
ထက်အောင်ကျော် (၁၇ ၀၉ ၁၁)
မနက်ဖြန် တနင်္ဂနွေ။ စက်တင်ဘာ ၁၈ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ကအာနာသိမ်းခဲ့တာ။ ဒါမှ မဟုတ် အဲဒီ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို လက်နက်ကိုင်ပီး တော်လှန်မှရမယ်ဆိုပီး ကျနော်တို့တတွေ အိမ် ကနေထွက်ခွါ တောခိုလာခဲ့တာ ၂၃-နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။ အခု ၂၃-နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ ကျနော် အပါဝင် တောခိုကျောင်းသားတွေ ဘယ်ဆီရောက်ပီး ဘာတွေဆက်လုပ်နေကြသလဲ။
တော်လှန်ရေး ဆက်လုပ်နေသလား။ တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံရပ် ခြားမှာ အဆင့်မြင့်ပညာတွေသင်ယူနေကြသလား။ ဒါမှမဟုတ် တိုင်းပြည်စီးပွါးတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီနိုင်အောင် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ဖို့ကျိုးစားနေသလား။ ဒါမှမဟုတ် အခြေခံ လူမှုအဖွဲ့ စည်းတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အန်ဂျီအို-လုပ်ငန်းခွင်ကို လေ့လာ နေကြသလား။ ဒါမှမဟုတ် စားဝတ်နေရေးကိစ္စ။ မိသားစုကိစ္စနဲ့ဘဲ့ လုံးချာလိုက်ပီး ၂၃-နှစ်ခရီးက ပန်း တိုင် နဲ့ပိုနီးလာသလား။ ပိုဝေးသွားသလား ဆိုတာကိုတောင် စဉ်းစားဖို့အချိန်မရဖြစ်နေတာလား..။
သေချာတာတခုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃-နှစ်က တောခိုလာတဲ့ကျောင်းသားအင်အားအများစု ကြီးဟာ အခုချိန်မှာတော့ မူလရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်တော် လှန်ရေးနဲ့ အလှမ်းဝေးရာ။ သူတို့အိမ်ကထွက်ခွါလာစဉ်က နေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နယ်စပ်ကတောတောင်တွေနဲ့ ဝေးကွာရာ။ ရေခဲပြင် တွေ။ ဆီးနှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ မြောက်အမေရိကတိုက်။ ဥရောပတိုက်နဲ့ သြစတေလျတိုက်တွေဆီ ရောက်ရှိနေတာ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်စပြုလာခဲ့ပါပြီ။
ကုလသမဂ-ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းဇယားတွေ။ နယ်စပ်ရှိ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြော တဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရဆိုရင် မနီလွိုင်အပါဝင် နယ်စပ်တကျောရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းအသီးသီးကနေ တတိယနိုင်ငံတွေဆီထွက်သွားတဲ့ဦးရေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀-ကျော်ကာလအတွင်း ၅-သောင်းကျော် နေပီဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်အမေရိကားတိုက်က အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါက အများဆုံးလက်ခံထားတယ် လို့ယူဆရပီး သြစတေလျနဲ့ ဥရောပက ဒုတိယနဲ့ တတိယ-နေရာတွေမှာရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါ တယ်။
တတိယ-နိုင်ငံရောက် တောခိုကျောင်းသားတွေ အခု ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ
ဒီမေးခွန်းက မေးတာလွယ်သလောက် ဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အခုချိန်ထိ အသေချာသုတေသနလုပ်ပီး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းဇယားတွေ မတွေ့ရသေးတဲ့အတွက် ဟိုတစ ဒီတစ ရထားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံထားတဲ့ မှန်းချက်လောက်ကိုဘဲ့ ဒီနေရာမှာတင်ပြနိုင်မဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ တတိယနိုင်ငံရောက် ဒုက္ခသည် ၅-သောင်းကျော်ထဲမှာ ၈၈-က တောခိုခဲ့တဲ့ကျောင်း သား ၃-ထောင် ၀န်းကျင်လောက်ပါဝင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
အဲဒီထဲက အဆင်ြ့မင့်ပညာ ဒေါက်တာ ဘွဲ့နဲ့ မဟာဘွဲရသူ ၃၀-မပြည့်သေးဘူးလို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးမှာ အသိမှတ်ပြု ဒီဂရီတခုခုရတဲ့အထိ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားသူ ဦးရေကလဲ ၃၀၀-၀န်းကျင်ဘဲ့ရှိ မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါ တယ်။ စီးပွါးရေးပညာရှင်အနဲအကျဉ်းကိုတွေရပေမဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကိုတော့ မတွေ့မိသ လောက်ပါဘဲ့။ မီဒီယာနဲ့ အန်ဂျီအို-အပါဝင် လွတ်လပ်တဲ့ လူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေကို ဦးစီးဆောင်ရွက်နေ သူ ဦးရေကလဲ ဒါဇင်ဂဏန်းလောက်မှာဘဲ့ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျန်တဲ့လူအများစုကြီးက ဘာတွေလုပ် နေကြသလဲ။ ဒီလိုဘဲ့ နေစဉ် စားဝတ်နေရေး။ မိးသားစုအရေးနဲ့ဘဲ့အလုပ်ရှုပ်ရှင်း ၂၃-နှစ် ကုန်လွန် သွားခဲ့တာလား။
တကယ်တန်းပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ တတိယ-နိုင်ငံမှာအခြေချရေးဆိုတာ အားလုံး အ ဆင်ပြေနေတာမျိုးမဟုတ်။ ပြောမယုံ ကိုယ်တွေကြုံမှသိဆိုတဲ့အတိုင်း တတိယနိုင်ငံမှာ နေထိုင် ရှင်သန် ရေးဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ကိုယ်မြေ။ ကိုယ်အိမ်။ ကိုယ်မိသားစု။ ကိုယ်ဆွေမျီုး။ ကိုယ့်မိတ်တွေ။ ကိုယ်သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်ခဲ့ပုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်။ တကယ်ကို ဘ၀သစ်တခုက သုညကနေ စ တင်ရုန်းကန်ရတာမျိုးပါ။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ မြောက်အမေရိကားတိုက်နဲ့ သြစတေလျတိုက်ဆီရောက် သွားသူတွေအဖို့ ဘာသာစကားသိပ်ပြသာနာမရှိပေမဲ့ ဥရောပတိုက်ဆီရောက်လာသူတွေကတော့ ဘာ သာစကားသင်ကြားရေးကို အယင်ဆုံးဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ဒေသခံစကားမတတ်ဘဲနဲ့ ဘာအလုပ်မှ မ ရနိုင်တဲ့အတွက် ရောက်ရောက်ချင်း ၂-နှစ်လောက်ကို ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဆက်အစီစဉ်တွေကိုသင်ကြားရပါတယ်။ ပီးရင်တော့ ၀ါသနာပါရာ ဘာသာရပ်သင်တန်းတွေကို ၆-လ တနှစ်လောက်တက်ပီး ရတဲ့အလုပ် ၀င်လုပ်ကြပေတော့။
ရာရအလုပ်ဆိုတာ တကယ့်ကိုရရာအလုပ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းကလိုမျီုး အရိုးများသလေး။ ချီးခါးသလေးပြောပီး ကျောင်းဆရာမလုပ်ချင်ဘူး။ စာရေးကြီးမလုပ်ချင်ဘူးငြင်းနေလို့မရ။ အမေ့အိမ် မှာတက်စားလိုက်။ ဆွေးမျိုးအိမ်မှာစားလိုက်နဲ့ ဘာမှမယ်မယ်ရရမလုပ်ဘဲ လယ်ရာပြန်စားရေးလုပ်နေဖို့ ဒီမှာ အခြေနေကခွင့်မပြု။ အသက်ကြီးမှ ဘာသာစကားအသစ်တခုကို သင်ရသူတွေအဖို့ မူလနိုင်ငံ သားတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှယှဉ်ရွေးခံလို့မဖြစ်နိုင်။ ဒီတော့ အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်း ရေးလုပ်သား။ ဆေးရုံနဲ့ လူအိုရုံအကူလုပ်သား။ မူကြိုကျောင်း ကလေးထိမ်းလုပ်သား။ ဆူရှီဆိုင် လုပ် သား။ သတင်းစာပို့သမား။ ကုန်စုံဆိုင် အရောင်းစာရေး။ စက်ပြင်လုပ်သား...စသဖြင့် ဒီအလုပ်တွေကို ဘဲ့ လုပ်နေကြရပါတယ်။ နယ်မြိုကလူတချို့ဆိုရင်တော့ သစ်သားစက်ရုံတွေနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေမှာ အလုပ်ရကြပါတယ်။ ဘာသာစကားကို သူများထက်ပိုထူးချွန်သူ အနဲအကျဉ်းကတော့ စကားပြန် အ လုပ်နဲ့ အဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ...အသက်သိပ်ကြီးမှရောက်လာလို့ ပင်စင်တန်းရသွားသူ အနဲအကျဉ်းလဲ အဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအများစုကြီးကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေနီးပါး ရုန်းကန်နေရဆဲ။
အခြေခံလူတန်းစားကလာတဲ့သူတွေအဖို့ ဒီလိုအခြေခံအလုပ်လုပ်နေရတာကို သိပ်ပြသာနာမရှိ ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းက မြိုနယ်ဆရာဝန်ကြီးလုပ်လာသူ။ မြိုနယ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်လာသူ။ ကျောင်း အုပ်ဆရာကြီးလုပ်လာသူ။ မဟာဘွဲ ရလာသူ။ တက္ကသိုလ်တပိုင်းတစနဲ့ အထက်တန်းပညာသင်ဖို့စိတ် ကူးယဉ်ပီးထွက်လာသူတွေခမျာတော့ သူတို့စိတ်ထဲမှာလုပ်ချင်နေတာနဲ့ သူတို့နေစဉ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ တချိန်လုံး စိတ်ညစ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် မလွဲ မရှောင်သာလို့ ဒီအလုပ်တွေကို နေ့စဉ်လုပ်နေရပေမဲ့ သူတို့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေ ဒီနိုင်ငံမှာ အလ ကားဖြစ်နေတယ်။ ဘာသာစကားလေးတခု မတတ်တာ။ မကျွမ်းကျင်တာနဲ့ဘဲ့ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးသင် ထားခဲ့တဲ့ပညာရပ်တွေ အလားကားဖြစ်ကုန်ရသလား။ အတတ်ပညာနဲ့အရည်ချင်းကို ဘာသာစကား တတ်မတတ်ပေါ်အခြေဆုံးဖြတ်တာ တရားမျှတမှုရှိပါရဲ့လား...စသဖြင့် ကိုယ်ဟာကိုယ်အငြင်းပွါးရင်း နေ့စဉ်ဘ၀ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေသူ များစွာကိုလဲ ကျနော်တွေ့နေရပါ တယ်။
"ဘာသာစကားဆိုတာ ဆရာဝန်တို့။ အင်ဂျင်နီယာတို့လို အတတ်ပညာရပ်တခု မဟုတ်ပါ ဘူး ဗျာ။ ကြားခံဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ကရိယာတခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်" ဆိုပီး စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်း ကျနော်သူငယ်ချင်းတဦးကပြောဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောမမှာတော့ ရောမ-ဥပဒေအတိုင်း ပါဘဲ့။ သူ့စကားမတတ်ရင် ဘာမှမဖြစ်။ ဒီတော့ စိုက်ပျိုးရေးဘွဲရပုဂိုလ်လဲ သူ့ဘွဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တခုကို မဖြစ်မနေ၀င်လုပ်နေရတာ တတိယ-နိုင်ငံဆီရောက်ပီးတဲ့နေ့ကနေ ဒီ နေ့ အထိပါဘဲ့။
ID မပါ။ CV ဗလာနဲ့ အလုပ်ရှာရလေသောအခါ
သူများအကြောင်းတွေပြောနေတာကတော့ ဟုတ်ပါပီ။ မင်းကိုယ်တိုင်ကကော အခု ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သားလား။ သတင်းစားပို့သမားလားလို့ ပရိတ်သတ်တဦးဦးက မေးလာ မယ်ဆိုရင် ... "အဲဒီအလုပ်တွေထဲက တခုခုရနိုင်ဖို့အတွက် နော်ဝေးစာ အ-သုံးလုံးကို အခုမှ စတင်သင် ယူနေရပါတယ်ခင်ဗျား" လို့ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အသက် ၄၀-ကျော်မှ ဘာသာ စကားအသစ် တခုကို သင်ရတဲ့အလုပ်ဟာ သိပ်မလွယ်လှ။
နယ်စပ်နဲ့ ထိုင်းမှာနေတုန်းက ကရင်စကား ထိုင်းစကားတွေကို အသေချာမသင်ဘဲနဲ့တောင် ထိုင်းရဲမဖမ်းအောင်။ ကရင်ဂိတ်ကပြသာနာမရှာနိုင် အောင်အထိ ပြောတတ်-ဖတ်တတ်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ အခုအော်စလိုမှာတော့ လနဲ့ချီပီး ကျောင်းမှာစနစ် တကျသင်နေတာတောင် နော်ဝေးစကားကမပီ။ သူများပြောတာကိုလဲကောင်းကောင်းနားမလည်။ ကိုယ် ပြောတာကိုလဲ သူများကနားမလည်။ ရေးတော့လဲလွဲနေဆဲ။ ကျနော်လက်ရှိတက်နေတဲ့ Rosenhof-ကျောင်းက နိုင်ငံတကာ သက်ကြီးကျောင်းသား တွေကိုကြည့်ပီး ကျနော်တို့ အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အ-သုံးလုံးသင်တန်းကို အမှတ်ရနေမိပါတယ်။ တချိန်က အ-သုံးလုံးကျောင်း ဆရာဟာ အခုတော့ အ-သုံးလုံး သင်တန်းသားဖြစ်နေပါရော့လား။
နောက်တခါ ကျနော်တို့ ဒီဗွီဘီ-၀န်ထမ်းဟောင်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်က နော်ဝေးရောက် တခြား မြန်မာတွေနဲ့မတူ။ အခုနော်ဝေးရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၀၀၀-၀န်းကျင်စလုံးဟာ ကုလသမဂ-ဒုက္ခသည် အ စီစဉ်နဲ့ ၂၀၀၂-နောက်ပိုင်း ရောက်လာကြသူတွေဖြစ်ပေမဲ့ ကျနောာ်တို့က အဲဒီအစီစဉ်ထဲကမဟုတ်။ ဒီဗွီဘီ -မှာတာဝန်ထမ်းဖို့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-နှစ်ကျော်ကတည်းက မြန်မာစာအုပ်အတုတွေနဲ့ ရောက် လာသူတွေဖြစ်ပီး နော်ဝေးလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အပြင်ဖက်မှာ ကိုယ်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ရှုတ်နေသူတွေ။ အခြေချဖို့ လဲ စိတ်ကူးမထားတဲ့အတွက် နော်ဝေးစာနဲ့ နော်ဝေးလှုအဖွဲ့စည်းကြောင်းလဲ ဘာမှလေ့လာမထား။ အခု အလုပ်ပြုတ်ပီဆိုတော့မှ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိနဲ့ နော်ဝေးစာကို ကကြီးခခွေးကနေ စသင်။ နော်ဝေး လူအဖွဲ့စည်းအကြောင်းကို "Vær så god" ကနေ စလေ့လာပီး မသေစာ အလုပ်တခုရဖို့ အသဲအသန် ပြင် ဆင်နေရတဲ့အခြေနေပါ။
ဒီတော့ အခု နော်ဝေးစာအတန်းထဲမှာ ကျနော်က လူထူးလူဆန်းဖြစ်နေခဲ့ပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် နော်ဝေးစာသင်နေတဲ့ ကျောင်းသားအားလုံးဟာ နော်ဝေးကိုရောက်ကစလူတွေဖြစ်ပီး ၁၀-ကျော် နော်ဝေးမှာနေပီးမှ နော်ဝေးစာကို ကကြီးခခွေးကနေ လာသင်တဲ့လူမျိုး သူတို့မတွေ့ဖူး။ နောက်တခါ အင်တာနက်နဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတွေ့တဲ့ ကျနော်အမည်က ထက်အောင်ကျော်။ ပါ့စပို့ထဲကအမည်က နောက်တမျိုးဖြစ်နေတာကိုလဲ သူတို့ကနားမလည်။ ပိုဆိုးတာက မွေးနေ့တောင် ၂-ခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ။ " အမည်ကတော့ မင်းမကြိုက်ရင် အသစ်ပြောင်းလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မွေးနေ့ကတော့ လူတဦးဟာ တ သက်မှာတခါဘဲမွေးတဲ့အတွက် မင်း ၂-ခါမွေးခွင့် မရှိဘူး" လို့ နော်ဝေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ အ ကြောင်းနားလည်တဲ့ မိတ်ဆွေတဦးက သတိပေးပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ စာအုပ်အတုထဲကဟာ တွေကို ကွန်ပြူတာစင်စတန်က အတည်ယူလိုက်တဲ့အတွက် အတုတွေဟာ အမှန်ဖြစ်သွားပီး တကယ် အမှန်တွေကိုတော့ ကျနော်ပြန်ပြင်နိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါ။
ဒီတော့ ထက်အောင်ကျော် သို့မဟုတ် ၀င်းထိန်အမည်နဲ့ ကျနော် ရထားခဲ့တဲ့ စာရွက်စာတန်း တွေ။ အောင်လက်မှတ်တွေ။ ဒီပလိုမာတွေဟာ လက်ရှိ ပါ့စပို့ထဲကအမည်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့။ ဆိုင်ရင် တောင်မှဘဲ့ မြန်မာပြည်က တတ်လာတဲ့ ပညာရေးကို ဒီမှာကအသိမှတ်မပြု။ သတင်းထောက် ၁၅-နှစ် ကျော်လုပ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ အဲဒီအတွေ့အကြုံကို ဒီနိုင်ငံကအသိမှတ်မပြု။ ဒီနိုင်ငံက အသိမှတ်ပြုထား တဲ့ ဘွဲဒီဂရီမျိုးမရှိဘဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် သတင်းထောက်ဖြစ်နေတာလဲလို့တောင် အမေးခံလိုက်ရပါသေး တယ်။ ဒီတော့ နော်ဝေးစာကို အ-သုံးလုံးကနေစသင်ပြီး သတင်းထောက်သင်တန်းကို အစကနေ ပြန် တက်မလား။ ဒါမှမဟုတ် စကားပြောစရာသိပ်မလိုတဲ့ သတင်းစာပို့တဲ့အလုပ်ကိုဝင်လုပ်မလား။
တနည်း အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ထက်အောင်ကျော်ဟာ "မြန်မာတွေအတွက်တော့ သ တင်းစာဆရာ။ နော်ဝေးတွေအတွက်တော့ သတင်းစာပို့သမား'' ဖြစ်မဲ့ အလားလာက ပိုပိုများလာနေပါ တယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင် တတိယ-နိုင်ငံရောက် လူ ၅-သောင်းကျော်ထဲက ၁၀-ဂဏန်းတောင် မပြည့်တဲ့သူရဲကောင်းတွေလို အားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပီး ထိုင်းနယ်စပ်ကိုပြန်ကာ ဘော်လန်တီယာ ဆက် လုပ်မလား ဆိုတာဟာ မကြာခင်ရွေးချယ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ပြန်ချိန် နွေ ရောက်ပီလား
ဘ၀သစ်တခုအတွက် ရွေးချယ်စရာလမ်း ၃-သွယ်ကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန်စဉ်းစားနေစဉ်မှာ အရပ်ဝတ် စစ်အစိုးရသစ်ရဲ့သမ္မတကြီးကနေ ပြည်ပရောက်နေသူတွေ ပြန်လာချင်ကပြန်လာနိုင်တယ် ဆိုပီး လေသံပစ်လိုက်တဲ့အတွက်။ ပြန်ချင်သူတချို့လဲ တကယ်ပြန်နေကြတာကုို စတင်မြင်တွေ့နေ ရပီဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ် လမ်းတသွယ်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမလိုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြသာနာက အခုလိုအိမ်ပြန်နည်းဟာ ကျနော်တို့ တောစခိုစဉ်က စဉ်းစားလာခဲ့တဲ့ အိမ် ပြန်နည်းမျိုးမဟုတ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃-နှစ် ဒီလိုအချိန်မျိုးတုန်းက ကျနော်တို့တတွေစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ အိမ်ပြန်နည်းကတော့ ကျနော်တို့တောမခိုခင် နှစ် ၄၀-ခန့်ကကြိုတင်တောခိုခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ရဲဘော် ၃-ကျိပ်ဝင်တွေဦးဆောင်တဲ့ ဗမာ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကြီး ထိုင်းနယ်စပ်ကနေ မြန်မာ နိုင်ငံထဲ စစ်ကြောင်းချီပီးဝင်လာတဲ့ အိမ်ပြန်ခြင်းမျီုး။ ပြည်သူတွေက သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုတဲ့ အောင်ပွဲခံအိမ်ပြန်ခြင်းမျိုးသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခြေနေဟာ ကျနော်တို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သလိုဖြစ်မလာခဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ရဲ ဘော် ၃-ကျိပ်ဦးဆောင်တဲ့ ဗမာ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှအပ အဲဒီနောက်ပိုင်းတောခိုခဲ့တဲ့ ဗမာ ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ။ ပြည်ချစ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး။ ကျောင်းသားတပ်မတော်နဲ့ လူမျိုးစုတပ်ဖွဲ့ အ သီးသီးဟာ အခုချိန်ထိ အောင်ပွဲနဲ့အတူ အိမ်ပြန်နိုင်တာမျိုး တဖွဲ့မှမတွေ့ရသေး။ လာမဲ့ နှစ်ပိုင်းအတွင်း မှာလဲ ပြန်နိုင်မဲ့ လမ်းစမမြင်ရသေး။ ... ဘာတွေများ ကျနော်တို့ မှားယွင်းအားနဲခဲ့လို့လဲ။ တောခို ကာစ ကတည်းက မေးလာခဲ့တဲ့မေးခွန်းဟာ အခုချိန်ထိ အဖြေမထွက်သေးပါ။
ဆိုတော့ အောင်ပွဲနဲ့အတူ မပြန်နိုင်ရင် အရှုံးပေးပြီး ဒါမှမဟုတ် သံတမန်ဆန်ဆန် စကားလုံး တွေကိုရွေးသုံးရမယ်ဆိုရင် ဟိုဖက်ကဖိတ်ခေါ်လို့ သင့်တော်နေတဲ့အချိန်မှာ အခြေနေကြည့်ပီး ပြည် တော်ပြန်ကြမလား။ တတိယ-နိုင်ငံရောက် ရဲဘော်ဟောင်းတချို့နဲ့ အွန်လိုင်းကနေ သဘောထား တီး ခေါက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
"ရူးနေလားဗျာ။ ထောင်ထဲကလူတွေကိုမလွတ်ပေးဘဲနဲ့ အပြင်ကလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ် ဆိုတာ အဓိပါယ်မရှိဘူး" လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဘ၀ကနေ တတိယ-နိုင်ံဆီ ရောက်လာသူ တဦးကပြောပါတယ်။
ABSDF ရဲဘော်ဘ၀ကနေ တတိယ-နိုင်ငံဆီရောက်နေတာ ၁၀-နှစ်နီးပါးရှိတဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပုဂိုလ် တဦးကတော့..."နယ်စပ်မှာ တိုက်ပွဲတွေအရှိန်ကောင်းနေပီ။ လူမျိုးစုပြသာာနကို သူတို့ဘယ်လိုကိုင်မ လဲ။ ဒီတော့ ပြန်ချင်းပြန်ရင် ရန်ကုန်မပြန်ဘဲ နယ်စပ်ကိုပြန်ပီး မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်သင့် တာပေါ့ဗျ" လို့ ထင်မြင်ချက်ပေးပါတယ်။
၁၉၉၀-နောက်ပိုင်းကျမှ တောခိုပြီး တတိယ-နိုင်ငံဆီရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတခုမှ ပါတီ ၀င်တဦးကတော့..."နယ်စပ်မှာလဲ အခြေနေကမကောင်းဘူးဗျ။ ဘယ်ဒိုနာ (အလှူရှင်) ကမှ ကျနော်တို့ ကိုမပေးတော့ဘူး။ ဒိုနာတွေက နယ်စပ်ကိုကျော်ပီး ပြည်တွင်းထဲဝင်ဖို့ပြင်နေပီဆိုတော့ သိပ်မလွယ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ABSDF လိုမျိုး ရဲဘော်ဟောင်းတွေဆီကရတဲ့ ငွေနဲ့ လည်ပါတ်ရမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာနေပီ" လို့ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနဲ့မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်ရင်းကနေ ဒုက္ခသည်အဖြစ်ခံယူပီး တတိယ-နိုင်ငံဆီရောက် လာသူ တဦးကတော့ "ဒုက္ခသည်စခန်းကလူတွေ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေက နိုင်ငံခြားထွက်ချင်လို့ အသဲအသန် ကျိုးစားနေချိန်မှာ တတိယ-နိုင်ငံရောက်ပီးမှ အားလုံးကိုစွန့်ပီး မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူထက် မိုက်တဲ့လူ ဘယ်ရှိတော့မလဲဗျ" လို့ အရှိ်တရားတခုကို ရိုးသားစွာထုတ်ပြောလာ ပါတယ်။ သူရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာ ရှေ့ကပုဂိုလ် ၃-ဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ထက် ပိုလက်တွေ့ကျတယ်လို့ကျနော် ယူဆပီး ဒီလိုပုဂိုလ်တွေဟာ တတိယ-နိုင်ငံအခြေချ လူ ၅-သောင်းကျော်ထဲက လူများစုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ တွက် ချက်မိပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာကော တတိယ-နိုင်ငံရောက်သူတွေ ဘယ်လိုအိမ်ပြန်ကြသလဲ
ဆိုတော့ ဒီလူတွေဟာ အိမ်ပြန်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိကြတော့ဘဲ အထဲကလူတွေကိုတောင် အပြင် ကိုအမြန်ခေါ်ထုတ်ဖို့စိတ်ကူးနေကြပီလား။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာကော နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတခုခုဖြစ် ရင် တတိယ-နိုင်ငံရောက်သူတွေ အိမ်ပြန်ကြသလား။ မပြန်ဘဲ ဒီတိုင်းဘဲ့နေပီး တတိယ-နိုင်ငံမှာဘဲ့ ခေါင်းချသွားကြသလား။ ကျနော်စဉ်းစားရင်းနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကို စောင်းငဲ့ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ပညာရှင်တဦးလို အချိန်ယူသုတေသနလုပ် စစ်တန်းထုတ် တာမျိုးမဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃-နှစ်တာအတွင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့။ မြင်ခဲ့ရတာကို နှိုင်းယှဉ်တင်ပြတဲ့ အဆင့်လောက်သာ ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ ABSDF နဲ့ မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု ထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ ထိုင်းနယ်မြေထဲ အား ကောင်းစဉ် ၁၉၉၀-ပြည့်လွန်နှစ်တွေက ကျနော်တို့တော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့အတူ ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ် ။ စီမီနာတွေအတူတက်ခဲ့တဲ့ အရှေ့တီမောက သူပုန်ခေါင်းဆောင်တွေ ၂၀၀၀-ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ပြည် တော်ပြန်သွားပါတယ်။ ကုလသမဂ-ရဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုအရ သူတို့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရလို့ အခုလိုပြန် သွားတာဖြစ်ပီး ကျနော်တို့နဲ့ ဘန်ကောက်မှာလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူပုန်ခေါင်းဆောင် Xanana Gusmão က သမ္မတ။ နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် José Ramos-Horta က ၀န်ကြီးချုပ်တွေအဖြစ် တာ ၀န်ယူပီး တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထူထောင်လိုက်တာ အခု အတော်ခရီးရောက်နေပါပီ။
သူတို့လိုအိမ်ပြန်ခြင်းမျိုးကို ကျနော်မျော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခြေနေက အဲဒီလို ဖြစ်မလာခဲ့ ။ တခြားအာဆီယံနဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာလဲ ဒီလိုအခြေနေမျိုးကိုမတွေ့မိ။ လူမျိုးစု သူပုန်ထ နေတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ တိုင်းပြည်တခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားအောင်။ လစ်ဗျားက သူပုန်တွေလို နိုင်ငံတခုလုံးကိုသိမ်းနိုင်တဲ့ အခြေနေမျိုးမတွေ့မိသေး။ ကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုရင် ကွန်မြူနစ်သူပုန် ခမာနီ တွေ ခေါတ်ကုန်သွားတဲ့အပြင် Pol Pot-အစိုးရရဲ့လက်ကျန်ခေါင်းဆောင်တွေ နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်ခံနေ ရပါတယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်တလျောက်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလဲ ပိတ်ပစ်လိုက်ပီး ဒုက္ခသည်တွေကိုလဲ အိမ်ပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နီပေါမှာတော့ ကွန်မြူနစ်သူပုန်တွေ အင်အားဆက်ကောင်းနေပီး လူများစု အဖြစ်နဲ့ ပါလီမန်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲပါဝင်နိုင်တဲ့အထိ တိုးတက်နေပါတယ်။ သိရိလာင်္ကာမှာတော့ တမီး ကျားသူပုန်တွေ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲ...တိဘက်ဒေသမှာတော့ အခြေနေတွေဟာ မသေချာမချာရှိနေဆဲဖြစ်ပီး ဘုန်းတော်ကြီးတလိုင်းလာမားနဲ့ ပြည်ပရောက် တိဘက်တွေ အခုချိန်ထိ အိန္ဒိယမှာသောင်တင် နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေနေမျိုးမှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရနဲ့ ဗိယက်နမ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရတွေက ပြည်ပ ရောက် ပညာတတ်တွေ။ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ပြည်တော်ပြန်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာ အတော် များများပြန်သွားကြတာကိုလဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃-နှစ် ဖြစ်စဉ်အတွင်း ကျနော်သတိထားမိပါတယ်။ ဆိုတော့ ... အခု သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ အိမ်ပြန်ခြင်းမျိုးဟာ တရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်က ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူနေလေမလား။
ဆိုိလိုတာက နိုင်ငံရေးကိုပုံစံကိုတော့ ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ ကွန်မြူနစ်အစိုးရက အပိုင်အနိုင် ထိမ်း ချုပ်ထားဦးမှာဖြစ်တယ်။ ဒါမေပဲ့ စီးပွါးရေးနဲ့ တခြား ဂွင်-တချို့ကိုတော့ သင့်တင့်လျောက်ပါတ်သလို လမ်းစဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ ဒီလိုပါဘဲ့။ နိုင်ငံရေးကိုတော့ ၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်း ပုံနဲ့ စစ်တပ်ကြီးစိုးတဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့က အပိုင်အနိုင် ထိမ်းချုပ်ထားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွါးရေး နဲ့ တခြားအသေးအမွှား ဂွင်-တချို့ကိုတော့ စတင်ဖွင့်ပေးတော့မယ်။ ဒီအတွက် ပြည်တော်ပြန်လာပီး လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောလို့ ကျနော်နားလည်မိပါတယ်။
ဒီလိုလမ်းဖွင့်ပေးတာ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုမပြုပြင်ဘဲ စီးပွါးရေးနဲ့ တခြား ဂွင်-တွေမှာ နဲနဲချင်းဖွင့်ပေးတာကို တချို့ကလက်မခံနိုင်ပေမဲ့ တချို့ကတော့ ဒါကို အပြောင်းအ လဲရဲ့လမ်းစလို့မြင်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုလမ်းစဖွင့်ပီးနောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်နဲ့ ဗီယက်နမ်ရဲ့ စီးပွါး ရေးဖွံဖြိုးမှုအကြီးအကျယ်တိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပီး အခုဆိုရင် ကွန်မြူနစ်တရုတ်ဟာ ဒီမို က ရေစီ ဟီးရိုးကြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အကြွေးရှင်တောင်ဖြစ်လာတဲ့အထိ အခြေနေက ပြောင်း ပြန်အချိုးနဲ့ကို တရှိန်ထိုးပြောင်းလဲ လာနေပီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရှိတရားကို ဘယ်သူကမှငြင်းချက်မထုတ်နိုင်ပါ။ တချိနည်းမှာဘဲ့ နောက်ထပ် ငြင်းချက် မထုတ်နိုင်တဲ့ ပြောင်းပြန်သက်ရောက်မှုတခုကလဲ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒီလောက် စီးပွါးရေး တွေတိုးတက်ပီး အမေရိကန်ရဲ့အကြွေးရှင်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံက တရုတ်လူမျိုးတွေ ထောင်-သောင်းချီပီး နေ့ စဉ် အမေရိကား။ ဥရောပနဲ့ သြစတေလျတိုက်တွေဆီ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ထွက်ပြေးနေကြတဲ့အချက်ဖြစ် ပါ တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ စီးပွါးရေးဖွံဖြိုးနေယုံနဲ့လဲ ကိစ္စကမပြီးသေး။ နောက်ဆက်တွဲ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ပါ ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေဆဲဆိုတာကို သက်သေပြနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နဲ့ ဗီယက်နမ်လို နိုင်ငံရေးမပြုပြင်ဘဲ စီးပွါးရေးနဲ့ တခြား ဂွင်-တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆီသွားဖို့ အဆင်သင့်ပြင်နေပီလား။ ဒီအခြေနေမှာ တတိယ-နိုင်ငံရောက် ပညာတတ်ပုဂိုလ်တွေ ပြည်တော်ပြန်ပီး အစိုးရသစ်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်တန်နေပီလား။ အွန် လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့တဲ့ မီဒီယာသမားတဦးကို ကျနော်ထပ်မေးကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
"ပြန်သင့်တာပေါ့ဗျာ။ အိမ်ကထွက်လာကတည်းက ပြန်ဖို့စောင့်နေတာဘဲ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဂုဏ်သိ က္ခာရှိတဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အိမ်ပြန်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိ ထားစေချင်ပါတယ်" လို့ အဲဒီပုဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ "မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေရအောင် အထဲကိုဝင်ပြီး ကျနော်တို့ကျိုးစားဖို့လိုနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုလာတဲ့သူကို အီးမေးလ်။ အင်တာနက် သုံးလို့ဆိုပီး အီလက်ထရော နစ်ပုဒ်မနဲ့တရားစွဲထောင်ချမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ" လို့ သူက ထောက်ပြပါ တယ်။
နောက်တခါ အင်တာနက်။ တယ်လီဖုန်းအပါဝင် အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ။ အခြေခံအဆောက် ဦတွေ ဘာမှအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အတွက် ပြည်ပကနေပြန်လာသူတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေနိုင်ပါ့မ လား။ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုလဲ သူက စိုးရိမ်နေပါတယ်။ "လောလောဆယ်ကတော့ ပြန် တယ်ဆိုရင်တောင် ဒေါက်တာဇော်ဦးတို့ပြန်သလိုမျိုး သွားလိုက်-လာလိုက်အခြေနေမျိုးဘဲ့ရှိမှာပါ။ ဟို မှာပြန်ပီး အပီးနေဖို့ဆိုိတာကတော့ ဒီအစိုးရသက်တန်း ပထမ-၅-နှစ်အတွင်းမှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူး ထင်ပါတယ်" လို့လဲ သူကဆိုပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒေါက်တာဇော်ဦးတို့လို အခုပြောနေတဲ့မီဒီယာ ဆရာလို ပုဂိုလ်တွေ ပြည်တော်ပြန်ပီး အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကျိုးစားတာကတော့ ဟုတ်ပါပီ။ လူများစုကြီးဖြစ်တဲ့ လူဦးရေ ၅-သောင်းလောက်က ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ။ ၂၀၁၀-ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကလိုမျိုး Vote No, No Vote နဲ့ အချင်းချင်း အငြင်းပွါးပီး အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ ကြံဖွံ့ပါတီ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရသွားတဲ့အခြေနေမျိုးဆီ တွန်းပို့တဲ့အဖြစ်မျီုးကို ထပ်လုပ်ကြဦးမှာလား။ ဦးသိန်းညွန့်လို အမတ်မျီုး လွတ်တော်ထဲ များများရောက် သင့်တယ်လို့ မထင်မြင်မိဘူးလား။
ဆိုလိုတာကတော့ ပြန်ဝင်ချင်သူနဲ့ မ၀င်ချင်သူတွေကြား အပြန် အလှန် တိုက်ခိုက်ပီး အင်အားဖြုန်းကြမလား။ ဒါမှမဟုတ် အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ သူအခြေနေ။ ကိုယ့် အခြေနေအရ အားလုံးအလုပ်ဖြစ်နိုင်မဲ့ လမ်းကြောင်းတခုပေါ်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလား။
သေချာတာတခုကတော့ ဒီနေ့ပြောနေကြတဲ့ အိမ်ပြန်ခြင်းဆိုတဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃-နှစ် ကျနော် တို့ တောစခိုစဉ်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ အိမ်ပြန်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Face Book ပေါ်မှာတောင် လွတ်လပ်ခွင့်မရသေးတဲ့ ဘ၀ခါးခါးပိုင်ရှင်များ
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ၈၀၀-ကျော်ဟာ နေ့စဉ် Facebook သုံးနေတယ်လို့သိရပီး အဲဒီထဲမှာ မြန်မာလူဦးရေ ဘယ်လောက်ပါသလဲဆိုတာကိုတော့ ကျနော်မသိပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု ဒီဆောင်းပါးကို လာ ဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေမှာတော့ Facebook အကောင့်တခု ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ "ဟုတ်တယ်မို့ လား"
ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစိတ်ကူးတွေနဲ့ Fcaebook အကောင့် ဖွင့်တာလဲ။ ဘာပုံတွေတင် ထားသလဲ။ ကိုယ်အကြောင်းကိုယ်ကော အမှန်တိုင်းရေးထားရဲ့လား။ အဲဒီမေးခွန်း ၃-ခုလောက်ကို မိတ် ဆွေဖြေပေးနိုင်မလား။
ကျနော်ဒီလိုမေးလိုက်လို့ ဒီဗွီဘီ-ကအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ ထက်အောင်ကျော်တယောက် Face Book ကုပဏီမှာ အလုပ်ရနေပီလားလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အလုပ်လက်မဲ့ဘ၀နဲ့ ကျနော်တက်နေတဲ့ နော် ဝေးစာ အ-သုံးလုံးကျောင်းက သူငယ်ချင်းကျောင်းသားတဦးက ကျနော်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းကို ကျနော် က မိတ်ဆွေကိုပြန်မေးကြည့်ချင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ခံရဖို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ကျနော့် Fcaebook -ထဲကပုံတွေမှာ ကျနော်ပုံ တပုံဘဲ့ပါပီး ဘာကြောင့်မိသားစုပုံမပါတာလဲ။ မင်းမိဘတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ထားလို့လား- ဆိုပီး အဲဒီကျောင်းသားက ကျနော်ကိုမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီကောင့် Fcaebook -မှာကော မိသားစုပုံ ပါရဲ့လားဆိုပီး ကျနော်လေ့လာကြည့်တော့... ဟုတ်တယ်ဗျာ။ မိသားစုပုံတွေတင်ထားလိုက်တာ။ အဖိုး တွေ-အဖွားတွေရော။ အဖေတွေအမေတွေရော။ ဒေါ်တွေ ဦးလေးတွေရော။ ညီတွေ။ ညီမတွေရော မျိုးဆက်လိုက်ကို စုံနေတာပါဘဲ့။
"အခြေနေချင်းက မတူဘူးလေ မောင်ရင်။ ကိုယ်က မြန်မာနိုင်ငံကပြေးလာတဲ့ကျောင်းသား သူပုန်။ မင်းက နော်ဝေးမှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့ ပုံမှန်နိုင်ငံခြားသားတဦး။ မင်းမိသားစုပုံတွေအားလုံး Fcaebook တင်နိုင်လေကောင်းလေဖြစ်ပေမဲ့ ငါမိသားစုပုံသွားတင်ရင် အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့" လို့ ပြောပြတော့ တောင်အာရှနိုင်ငံသား ကျနော့်ရဲ့ အတန်းဖေါ်သူငယ်ချင်း ပခုံးတွန့်ပြ။ မျက်လုံးပင့်ပြပီး နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
"Why?" သို့မဟုတ် နော်ဝေးလို မတတ်တခေါက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် "Hvorfor?" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုဘဲ့ သူက ထပ်ကာထပ်ကာမေးနေပါတော့တယ်။
ပွင့်လင်းခေါတ်ဦးက Fcaebook -ပေါ်ကိုတောင် မရောက်သေးဘူးလား
သူမေးမယ်ဆိုလဲ မေးချင်စရာပါဘဲ့။ ကျနော့် Fcaebook မှာ ပုံသစ်တွေတင်ထားလို့ သူကို ကြွားမိတဲ့အချိန်ကလဲ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နေပြည်တော်ဆီသွားနေတဲ့အချိန်။ တမ္ဘာလုံးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒိမိုကရေစီလမ်းစမြင်နေရပီ။ အားလုံးအဆင်ပြေစပြုနေပီလို့ နားလည်ထားချိန်မျီုး ဆို တော့ ... ဘာကြောင့် Fcaebook ပေါ် မိသားစုဓါတ်ပုံတင်ယုံနဲ့ ဒုက္ခရောက်နိုင်တာလဲဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်သူတဦးအဖို့။ မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်နေသူမဟုတ်သူတဦးအဖို့ ဘယ်လို မှ နားလည်နိုင်စရာမရှိနိုင်ပါ။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ကဘဲ့ လက်ရှိအခင်းအကျင်းပေါ်သံသယများနေပီး စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲနေတာလား။ Fcaebook -ပေါ်က တခြားကျနော်ရဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေတွေကော သူတို့မိသားစုပုံတွေကို လွတ်လွတ်လပ် လပ်ရဲရဲဝံ့ဝံ့တင်နေကြပီလားဆိုပီး Profile တွေ။ ဓါတ်ပုံတွေကိုအသေချာ လိုက်ကြည့်မိပါတယ်။ သေ ချာတာကတော့ တောထဲကနေ တတိယ-နိုင်ငံဆီရောက်လာတဲ့ ကျနော်ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံး ဘယ်သူကမှ မိသားစုပုံတင်ထားတာမတွေမိသေးပါ။
ကျနော်ဆိုလိုတဲ့ မိသားစုပုံဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာကျန်နေတဲ့ မိဘတွေနဲ့ တတိယ-နိုင်ငံရောက် သားသမီးတွေ အတူရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုပြောတာပါ။ ဒါ ပေမဲ့ ထူးထူးခြားခြား သူတိုတတွေအားလုံးနီးပါးတင်ထားတဲ့ပုံကတော့ တတိယ-နိုင်ငံမှာမွေးသူ။ ဒါမှ မဟုတ် တောတွင်းခစန်းတွေနဲ့ နယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာမွေးသူ သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကလေး ငယ်တွေရဲ့ပုံတွေ။ သူတို့နဲ့ သူတို့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပုံတွေဘဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ပြည်ပမှာရောက်နေသူတွေ။ ရန်ကုန်နဲ့ နှစ် ၂၀-ကျော်ဝေးကွာနေသူတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုလွန် ကဲနေတာကြောင့်များလား။ တကယ်လို့ နိုင်ငံရေးနဲ့မပါတ်သက် ဘဲ ပြည်ပမှာရိုးရိုးအလုပ်လာလုပ်နေသူ တွေ။ ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ Fcaebook -မှာဆိုရင်ကော် မိသားစုပုံတွေကို လွတ်လပ်စွာတင် ရဲနေကြပီလားဆိုပီး ကျနော်ထပ်လေ့လာကြည့်မိပြန်ပါတယ်။
"ဘယ်တင်ရဲမလဲ။ ငါက နင့်လို သူပုန်လူထွက်မှမဟုတ်တာ" ဆိုပီး စင်ကာပူမှာ အလုပ်လာ လုပ်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်တုန်းက ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတဦးဖြေပါတယ်။ သူအဖြေကို ထပ်ရှင်းပြရ မယ်ဆိုရင် ကျနော်မေးတာက မိသားစုပုံပါ။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ မိသားစုပုံမပြောနဲ့ သူပုံကိုတောင် သူ မတင်ရဲလို့ ရှုခင်းလိုလို။ ပန်းပွင့်လိုလို။ ရေတံခွန်လိုလို။ ဘုရားပုံလိုလိုတွေနဲ့သာ အခုချိန်ထိ စခန်းသွား နေသူဖြစ်ပါတယ်။
"မိသားစုပုံကတော့ ထားပါတော့ ကိုယ်ပုံကိုယ်တင်တာကတော့ ဘာဖြစ်မှာမုိ့လဲ" ဆိုပီး ကျ နော်ကထပ်မေးတော့..."မတင်ရဲသေးပါဘူးဟယ်။ အခြေနေက သေချာတာမဟုတ်သေးဘူး။ သူတုိ့ လက်အောက်မှာနေရတဲ့ဘ၀ဆိုတော့" ဆိုပီး အဲ ဒီသူငယ်ချင်း သူနာပြုဆရာမကပြောပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သာမန်နိုင်ငံသားတွေက ကျနော်တို့လို သူပုန် လူထွက်တွေထက်တောင်မှ ပိုစိုးရိမ်နေတာ ဘာကြောင့် လဲ။ ကျနော်စဉ်းစားနေပေမဲ့ တိကျတဲ့ အဖြေတော့ မရသေးပါ။
တခါ ပြည်တွင်းကနေ Fcaebook -တက်နေသူတွေ။ ကျနော်ကို add လာလုပ်ထားသူတွေရဲ့ လိပ်စာတွေကိုလိုက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ သိပ်မထူးပါဘူး။ မီဒီယာသမားတွေ။ နိုင်ငံရေးသမား တွေ။ ဘာမှမသိသေးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကလွဲရင် လူများစုကြီးက မိသားစုပုံရော။ သူ့ပုံသူ ရော တင်ထားတာမျိုးမတွေ့မိပါ။ အများစုဟာ စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းလိုဘဲ့ ရှုခင်းလိုလို။ ပန်းပွင့်လို လို။ ဘုရားပုံလိုလိုနဲ့ သွားနေဆဲဖြစ်တာကိုသာ ကျနော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တချုိ့ဆိုရင် ဘာပုံမှကိုမတင်ဘဲ ဒီတိုင်း ကွက်လာဒ်ကြီးချန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်တခါ info မှာလဲ ဘာမှအတိအကျရေးမ ထားပါဘူး။
ဘာကြောင့် Facebook ပေါ်တက်နေကြတာလဲ
ဒီလိုလေ့လာပီးတဲ့အခါမှာတော့ ဓါတ်ပုံလဲမတင်ရဲ။ အချက်လက်အမှန်လဲ မတင်ရဲဘဲ့နဲ့များ ဘာ ကြောင့် Facebook ဖွင့်ထားသေးလဲဆိုပီး ကျနော်ထပ်မေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ "သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့ အဆက်သွယ်ရချင်လို့" လို့စင်ကာပူကတဦးကဖြေပါတယ်။ ရန်ကုန်ကတဦးကတော့ "ခေတ်မှီအောင် ဖွင့်ထားတာပါ။ သူက သတင်းစုံမြင်ရတယ်လေ" ဆိုပီးပြောပါတယ်။ အော်စလိုရောက် တောင်အာရှနိုင် ငံသားကိုပြန်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော " Fun ဘဲ့လေ။ ပုံတွေတင်ပီး အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကြည့်ရ တာပျော်ဖို့သိပ်ကောင်းတယ်" လို့ဆိုပါတယ်။
ကဲ...အခုစာဖတ်နေတဲ့ မိဆွေကော ဘာကြောင့် Facebook အကောက်ဖွင့်ထားတာလဲ။ တတိ ယ နိုင်ငံရောက် ကျနော်သူငယ်ချင်းအတော်များများကတော့ ပြည်ပရောက်နေသူတွေ။ နယ်စပ်နဲ့ တော ထဲကဘော်ဒါတွေအကြား အပြန်အလှန်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်အောင်။ နေ့စဉ်သတင်တွေကို အ မြန်ဆုံးနည်းနဲ့သိနေခွင့်ရအောင် Fcaebook ဖွင့်ထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ သူတို့နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ့။ နိုင်ငံတကာဆီရောက်နေတဲ့ တောထဲက သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ချင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ တဖြေးဖြေးနဲ့ သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေ နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် တောထဲက အမှတ်တရဓါတ်ပုံတွေ။ ဆောင်းပါးတွေကိုပါ တင်နိုင်လာတဲ့ အတွက် သာမန်အပျော်တန်း fun အဆင့်ကိုကျော်လာတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
နောက်တခါ ကိုယ်ပိုင် သတင်းတွေ။ ဆောင်းပါးတွေကိုတင်နိုင်လာတဲ့အပြင် သူများတင်ထားတဲ့ သတင်းဦး။ သတင်းထူးတွေ ကိုလဲ ချက်ချင်း Like လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် Information အတွက်ပါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာသလို ထင်နေ မိပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာဘဲ့ Facebook နဲ့ online ပေါ်ကို မတက်ဖြစ်တဲ့နေ့မရှိသလောက်ဖြစ်လာပီး နေ့စဉ် တနေ့တာရဲ့ ၄-ပုံတလာက်ကို အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်နေတတ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ အမိမြေနဲ့ဝေးနေသူတဦးအဖို့ အွန်လိုင်းဟာ နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်း တခု အဖြစ်တိုးတိုးပီးနေရာယူလာနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ကျနော်တို့လို အသက် ၄၀-တန်း ၃၀-ကျော်လူတွေရဲ့စဉ်းစားချက်သာ ဖြစ်ပုံရပီး ဆယ်ကျော်သက်တွေစဉ်းစားပုံကတော့ နောက်တမျိုးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဘကြောင့်လဲဆိုတော့ "အွန် လိုင်းမှာ ကျုသူများ။ ကျု ကျုတွေ ဘာဖြစ်တယ်။ ညာဖြစ်တယ်"....စသဖြင့် စာသားတွေပါတဲ့ စိုင်းစိုင်း ခမ်းလှိုင်ရဲ့ သီးချင်းတပုဒ်ကို ဒီဆောင်းပါးရေးနေရင်းနဲ့ စင်ကာပူ အွန်လိုင်းရေဒီယို (http://www.apytz.net/) ကနေ ကျနော်ကြားမိ လို့ပါ။ ဒါဟာ မြန်မာလူငယ်တွေအများစုရဲ့အမြင်များဖြစ်နေလေမလားပါဘဲ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အ လုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ facebook, g-talk အမြဲတန်းဖွင့်ထားလေ့ရှိတဲ့ ကျနော့်အကောက်တွေဆီ ပြည်တွင်း က အဲဒီလို လူငယ်တွေက လာလာပီး Hi လုပ်တာနဲ့ ခနခနကြုံဖူးလို့ပါ။ "ကိစ္စရှိရင် လိုရင်းကို ရေး ထားခဲ့ပါ။ အရေးကြီးရင် မက်စေ့ရေးထားခဲ့ပါ" လို့ပြောရင် သူတို့က သိပ်ကြိုက်ပုံမရဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ် က လူတွေအားလုံးကို သူတို့လိုဘဲ့ အားအားယားယား -ကျု- နေသူတွေလို့ထင်ထားပုံရပါတယ်။ ဒါ ဟာလဲ အနာဂါတ်မျိုးဆက် အွန်လိုင်းချစ်သူတွေအတွက် အရေးတကြီးစဉ်းစားအဖြေရှာသင့်တယ်လို ထင်မိပါတယ်။
လွတ်လပ်ပွင့်လင်းခေတ်ကို ဘယ်တော့ရောက်မလဲ။ အဲဒီခေတ်အတွက် ခင်ဗျားဘာတွေပြင်ပီး စောင့်နေမလဲ
လိုရင်းကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင် ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ တခြားနိုင်ငံက သာမန်နိုင်ငံသားတဦးလို မိသားစုပုံဘဲ့ဖြစ်ဖြစ်။ ကိုယ့်ပုံဘဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ပုံကို လွတ်လပ်စွာတင်နိုင်တဲ့ခေါတ်ကိုရောက် ဖို့ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်အထိဆက်စောင့်ရဦးမလဲ။ စောင့်နေယုံသက်သက်အပြင် အဲဒီလွတ်လပ် ပွင့်လင်းခေါတ်ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင် စာရေးနေတဲ့ကျနော်ရော။ စာလာဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေရော ဘယ်လိုကျိုးစားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ။
ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Facebook-ပေါ်က ကျနော်သူငယ်ချင်းအားလုံးနီးပါးကတော့ ၈-လေးလုံးအရေးတော်ပုံကနေ ဒီနေ့အထိ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲအပါဝင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိ ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာဘဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ် ၂၀-ကျော်ကြာပီးတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျနော် တိုရဲ့ ကြိုးပန်းမှုကြောင့်လို့တိုက်ရိုက်မပြောနိုင်တဲ့။ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်းလဲမဟုတ်သေးတဲ့ အ ပြောင်းလဲ လမ်းစတခုကိုတော့ မြင်လာနေရပီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေ။ မကြိုက်သည်ဖြစ် စေ ကျနော်ရော။ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေရော ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပြောင်းလဲကို ကျနော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ Facebook ပေါ်ကနေ Like လုပ်ရင်းနဲ့ ဘဲ့ရင်ဆိုင်ကြမလား။ online ပေါ်မှာ တောင်ရေး-မြောက်ရေးနဲ့ဘဲ့ ကျေနပ်နေ ကြမလား။ ဒါမှမဟုတ် တကယ့်အခြေနေကို ထဲထဲဝင်ဝင် ကိုယ်တိုင်ဝင်ပီး ရင်ဆိုင်ကြမလား။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့ဘာ တွေ ပြင်ထားဖို့လိုမလဲ။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ဘယ်လိုစဉ်းစားထားသလဲ။
ကျနော်ကတော့ အချက် ၂-ခုကို သက်လုံ ကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်လို့ စဉ်းစား မိပါတယ်။ ပထမ-တခုကတော့ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခင်းအကျင်းသစ်မှာ အံဝင်ဂွင်ကျ ၀င်ကစားနိုင်မဲ့ အ ရည်ချင်းမျိုးပြည့်ဝနေအောင် လေ့ကျင့်ထားဖို့ပါ။ ဒုတိယ-တခုကတော့ အဲဒီလိုဝင်ကစားနိုင်အောင်။ အဲ ဒီအချိန်ထိ ကျမ်းမာပကတိ ချမ်းသာစွာရှိနေနိုင်ဖို့အတွက် တကိုယ်ရေ ကျမ်းမာရေးကို ကျနော်တို့မျီုး ဆက်တွေ ဒီထက်မက လေ့ကျင့်ဖို့လိုနေပီလို့ထင်ပါတယ်။
အရည်ချင်းစံချိန်မှီအောင်လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာဟာ လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲ နိုင်ပေမဲ့ တကိုယ်ရေကျမ်းမာရေးကတော့ ဘာမှသိပ်ခက်စရာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါမေပဲ့ Facebook နဲ့ online ပေါ်က ရဲဘော်ဟောင်းတွေ။ မိတ်ဆွေဟောင်းနဲ့ စကားပြောရင်း။ အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ ရင်းနဲ့ အသေချာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ မခက်ဘူးလို့ကျနော်ပြောတဲ့အချက်က သူတို့အတွက် ပိုခက်နေသလိုပါဘဲ့။
"ခင်ဗျားလို အားအားယားယား လေ့ကျင့်ခန်းဘယ်လုပ်နိုင်မလဲဗျ။ ကျနော်တို့က မိသားစုနဲ့။ ကလေးတွေနဲ့။ အလုပ်ပြေးလိုက်။ ကလေးကျောင်းကြိုလိုက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အချိန်ကိုမရှိဘူး" ဆို ပီး တောထဲမှာ ၁၀-နှစ်လောက်အတူနေဖူးတဲ့။ အခု တတိယ-နိုင်ငံတခုမှာရောက်နေတဲ့ ကျနော်ဘော်ဒါ တဦးက မာဘိုလိုစီးကရက်ခဲရင်း ကျနော်ကိုတုန့်ပြန်ချက်ပေးပါတယ်။
"ဆေးလိပ်သောက်တာကို ခင်ဗျားက အပြစ်ပြောဦးမလို့လား။ ရော့ ဟောဒီမှာ ခင်ဗျားအတွက် ဗော်လကာ" ဆိုပီး ကျနော်ကိုပါ အဖေါ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် သူပုံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-နှစ်ကျော် တောထဲကပုံနဲ့ဘာမှ မဆိုင်တော့။ အသားတွေဖြူလာပီး ကိုယ်အလေးချိန်က ၂-ဆမက တိုး လာတယ်လို့ကျနော်ထင်မိပါတယ်။ ဒါက တတိယ-နိုင်ငံရောက် ကျနော်တို့မျိုးဆက်တွေရဲ့ ကျမ်းမာရေး အခြေနေပါ။
ပီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ကာလ ထိုင်းခရီးစဉ်အတွင်းတွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းနေဖက် သူ ငယ်ချင်းတွေ။ ရွာကနေ ထိုင်းမှာအလုပ်ကြမ်းလာလုပ်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေကျတော့ ရှေ့ကပုဂိုလ်နဲ့ ခန္တာကိုယ်အချိုးအစားက ပြောင်းပြန်။ ကျနော်မတွေ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ နှစ် ၂၀-ကျော်ကာလအတွင်း ပိန် ညောင်ပီး အိုမင်းသွားလိုက်တာ ငယ်ရုပ်ကိုမနဲပြန်ဖမ်းပီး မှတ်မိအောင်ကျိုးစားခဲ့ရပါတယ်။
"ဘ၀မှာထွက်ပေါက်အဖြစ် ဒါလေးဘဲ့ရှိတာကွာ။ သောက်စမ်းပါ။ မင်းအတွက် စပါယ်ရှယ် ပြင် ထားပါတယ်" ဆိုပီး ဘီယာချမ်းနဲ့ ကျနော်ကိုဧည့်ခံနေပါတယ်။ သူကတော့ စိန်ချွန်းကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း သုံးဆောင်နေပီး ယာစင်းကိုလဲ အဖွာမပျက်နဲ့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ကျနော်ကိုပြောပြနေပါ တယ်။
ထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ တတိယ-နိုင်ငံက ကျနော်ဘော်ဒါတွေဟာ လောလောဆယ်ရောက်နေတဲ့ ပထ ၀ီ-အနေထား။ ရာသီဥတုအခြေနေ။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်။ လူမှုရေးအားမခံချက်တွေပေါ် မူတည်ပီး အိုဗာဝိတ်ဖြစ်သွားသူနဲ့ အလေးချိန်မပြည့်အောင် ပိန်ညောင်သွားသူအဖြစ်ကွာသွားတာက လွဲရင် ကျန်တာကတော့ သိပ်မကွာပါဘူး။ သူ့အလုပ်နဲ့သူရှုပ်နေကြပီး ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခင်းအကျင်း သစ်မှာ ၀င်ကစားနိုင်အောင် အရည်ချင်းလေ့ကျင့်ထားဖိုလဲ သတိမရ။ တကိုယ်ရေ ကျမ်းမာရေးအ တွက် လေ့ကျင့်ဖို့လဲ သတိမရဖြစ်နေတာကို ကျနော်နှိုင်းယှဉ်းစားနေမိပါတယ်။
ဒီလိုစဉ်းစားနေချိန်မှာ "ဟက်ပီး ဘာ့ဒေးပါ ရဲဘော်ကြီး" ဆိုပီး တတိယ-နိုင်ငံရောက် ရဲဘော် ဟောင်းဆီက မက်စေ့-တခု Facebook ပေါ်ဝင်လာပါတယ်။ သြော်... ဘာလိုလိုနဲ့ ကျနော်အသက်လဲ သိပ်မငယ်တော့ပါလား။ မနက်ဖြန်ဆိုရင် ပြည်ပမှာနေတဲ့သက်တန်းနဲ့ ပြည်တွင်းမှာနေခဲ့ဖူးတဲ့သက် တန်း အတူတူဖြစ်တော့မှာပါလား။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေနေဟာ ၂၄-နှစ်ကြာမှ တခါပြောင်းလဲတတ် သလားဆိုပီး စဉ်းစားနေမိပြန်ပါတယ်။
သေချာတာတခုကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ဘဲ့ပြောင်းလာသည်ဖြစ်စေ။ တခြားလူလုပ်လို့ဘဲ့ ပြောင်းသည်ဖြစ်စေ။ ကာလရွေ့လျားလာလို့ သူအလိုလိုပြောင်းလာသည်ဘဲ့ဖြစ်စေ အဲဒီပြောင်းလဲလာ တဲ့အခြေနေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ရပါဦးမည်။ ဒီအတွက် ညဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ။ အတတ် ပညာဆိုင်ရာ ဖြည့်ဆည်းမှုတွေအဆင်သင့်ပြင်ထားဖို့လိုသလို တဦးချင်းဆိုင်ရာ ကျမ်းမာသန်စွမ်းရေး ကိုလဲ ဖြည့်ဆည်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ကုန်လွန်သွားတဲ့ ၄၇-နှစ်က အတွေအကြုံတွေပေါ်အခြေခံပီး လာမဲ့ ၄၇-နှစ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ကျ နော်တို့မျိုးဆက်တွေ ကျိုးစားပြင်ဆင်ရပါဦးမယ်။ ညဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ။ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တဦးနဲ့တဦးတူအောင်လေ့ကျင့်ဖိုမလွယ်ကူပေမဲ့ တကိုယ်ရေကျမ်းမာရေးကိုတော့ လူတိုင်းတန်းတူလေ့ ကျင့်နိုင်တယ်လို့ကျနော်စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ အဲဒီလိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ Facebook ကို Log Out လုပ်။ ကွန် ပြူတာကို Shut Down လုပ်ပီး ကျမ်းမာရေးအတွက် နှင်းတောထဲ လမ်းလျောက်ဖို့ ကွန်ပြူတာစားပွဲရှေ့ ကနေ ကျနော်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
Posted by Htet Aung Kyaw at 12:28 PM